Short Story: Kusvira mbuya huudzwa – Vanoda Zvinhu
Short Story: Kusvira mbuya huudzwa
· Updated July 27, 2015
…by Mukwatura Nyini Toffee Toffee
Sekuziwa kwamunoita vanambuya vanekachijairira kekutamba chiramu nevazukuru. Vangu mbuya mukadzi wehanzvadzi yaamai vaipinda mumba mandairara vachitochinja zvawo ini ndirimo kubva ndichiri chikomana chidiki chichangopedza form four. Pese pawaitishanyira nekuti room yangu yaiva yakatarisana ne bathroom vaisada kumbotenderera vakamonerera zambia pamba pemukwasha. pese pandaitorova bonyora ndaiti ndikafunga ivo ndaikasika kutunda
Sekuru vangu vakange vatinonokei kuroora zvekuti vakatozoroora vane tunhu twavo saka vakabva varoora kamkadzi kechidiki kakabatana type inoda zvinhu iya maiziwa. Mukadzi aiwa ne dako nekachiuno katete ari mutsvuku tsvuku mazamu aiwa epakati nepakati uye akati achingoroorwa bvaita vana vake vairi gore mwana gore mwana ndokumira kwakuchizvimisa zvake mwana wevanhu.
Musi uyu ndakangopatika ndasvika kumba kwasekuru kuHatfield zvisina notice wanike sekuru havapo hanzi waenda kumusangano wekuchurch. Ndakakangirwa zvangu naambuya waindifarira nekuti ndaimbovakandira tuairtime twema$5.00 musi uyu ndainge ndauya kuzoudza sekuru kuti ndirikunetsana nemudzimai ndaida kuti vauye vazondiperekedza kumusha kwake tinotongwe.
Takatandara tichiona mamovie tiri vaviri sezvo musikana aiwa aenda ku off zvikomana zviri kuboarding. Ndakazonzwa ndakunzi ndapedza kugeza ndaisa mvura yako yekugeza mutub pano hapana anorara asina kugeza, ini nekusada kugeza ndikati ambuya ndogeza chete kana muchindikwesha musana ndichitotamba zvikanzi ndokukwesha. Ndakazopinda mubath kwakukatanura hembe ndichingonopinda mutub ndikaona musiwo wavhurwa mbuya wapinda zvikanzi ndoda kukukwesha musana. Vakatora tauro kwakutanga kundikwesha zvinyoro nyoro kumusana apa vange vakarowa gown zvawo, kagumbo kachibudikira. Vakatanga kutaura kuti sekuru vainge vakunyanya kushanda kuitira mafees evakomana, saka vaive vasisagari pasi. Ini kutowarairwa nekujweshwa musana kwandaiitwa kuzopatika ndakubata gumbo refanta riye wanike mbuya vakanda gown uko nekujambira mutub, apa yangu yakachecheudzwa yange yaita kuti twii tsinga dzachisiiti…
Nyota iyi, kusvirwa naDelivery Man :Part Two
· Published April 21, 2014
Next story Makwiriro andakazoita ndanwa kaPiritsi!
Previous story Short Story: I was happily Married Once….